ရှေ့ဆံပင်အမြဲချထားလေ့ရှိတဲ့ Lisa ရဲ့ ဆံပင်လှန်တင်ထားတဲ့ ရှားပါးအခိုက်အတန့်များ | Asia News Bar
ရှေ့ဆံပင်အမြဲချထားလေ့ရှိတဲ့ Lisa ရဲ့ ဆံပင်လှန်တင်ထားတဲ့ ရှားပါးအခိုက်အတန့်များ
BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ lisa ဆိုတာနဲ့ Bangs လေး နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ သူမရဲ့ အမှတ်သညာသင်္ကေတ လို့ဆိုရအောင် ပွဲဦးစထွက်ထဲက ဆံပင်ကို အရှေ့ချလေ့ရှိပါတယ်။ ဆံပင်ကာလာ၊ ဆံပင်ဒီဇိုင်း ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း Bangs လေးကတော့ မပြောင်းလဲပါဖူး။
Stage ပေါ်မှာ ဘယ်လောက် ခုန်ပေါက် က .. က .. အရှေ့ဆံပင်ကတော့ လုံးဝ ကေမပျက်လို့ အကုန်လုံးကတောင် အံ့ဩရတာပါ။ တခါတုန်းကဆို သူမ အရှေ့ဆံပင်ကို million ချီ ပေးရင်တောင် မရပါဖူးလို့ စနောက်ပြီး ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီလို အရှေ့ဆံမြိတ်လေးကို တန်ဖိုးထားလွန်းတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အရှေ့ဆံပင်လန်သွားတဲ့ ရှားပါးအခိုက်အတန့်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1. She’s too pretty!
ဒီပုံလေးဆို အရှေ့ဆံပင် ဘေးဝဲလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။ ဒီလိုကျတော့လည်း Lisa ဟာ Kpop idol ပုံစံမဟုတ်ဘဲ ထိုင်းမလေး တစ်ယောက်လို ပုံပေါက်နေတာပါနော်။
2. She’s definitely the maknae!
Lisa ဟာ “Real Men” Varity show ရိုက်တုန်းက တော်တော်ပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းဘဝကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာသွားရောက် သင်ယူရပြီး Celebrity ဆိုပေမဲ့လည်း စစ်သင်တန်းသားတစ်ယောက်လို နေထိုင်စားသောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထို show မှာ Lisa ရဲ့ make up မပါဘာမပါတဲ့ ပကတိစင်ကြယ်တဲ့ အလှကို ကြည့်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ဆိုလည်း သေချာသပ်သပ်ရပ်ရပ်ထုံးရတဲ့အတွက် Lisa က တမျိုးလေး ကြည့်ကောင်းနေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
ဒါကတော့ show ပွဲအတွက် make up , hair style ပြင်ဆင်ပြီးလို့ ခေတ္တအနားယူနေတဲ့ ပုံလေး snap မိသွားတာပါ။ Lisa က Sleeping Beauty လေးလို အိပ်ပျော်နေတာတောင် လှနေတာပါ။
4. She looks gorgeous even withamask!
ဒါကတော့ mask တပ်ထားတဲ့ အလှလေး ဖြစ်ပါတယ်။ mask ကြောင့် မျက်နှာအလှ သေချာမမြင်ရပေမဲ့ Barbie doll eye လေး ကို သေချာမြင်တွေ့နိုင်ပြီး Lisa ထုတ်ပြခဲတဲ့ နဖူးလေးကိုလည်း မြင်ရမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
5. Shorthair and bangless Lisa?! Yes, please!
တခါတုန်းက Lisa ဟာ သူရှေ့ဆံပင်တွေကို ဖယ်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ Live လွှင့်ဖူးပါတယ်။ မဟာနဖူးလေးဆိုပေမဲ့ Lisa က အသေချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါနော်။
6. We will never forget this look
“The Show” online Concert တုန်းက သူမ solo performance ဖြစ်တဲ့ Doja Cat ရဲ့ သီချင်း Say So ကို ဖျော်ဖြေတုန်းက သူမရဲ့ style နဲ့ Design ဟာ အားလုံးကို jaw drop ဖြစ်သွားအောင် ပြုစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နဖူးအလယ်ခွဲလေးနဲ့ Dark style make up ပြင်ထားတဲ့ Lisa ဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာ ငြင်းမရပါဖူးနော်။
7. Lovely Lisa
ဒီပုံလည်း ဆံပင်အလယ်ခွဲထားပေမဲ့ ဒါကျတော့ အရုပ်မလေးလို အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။
8. It wasalittle windy
ဒီပုံကတော့ လေတွေ တိုက်လွန်းလို့ အရှေ့ဆံပင်အကုန်လန်သွားတဲ့ Lisa ရဲ့ မေ့မရနိုင်မဲ့ ပုံလေးပါ။ ဒီပုံလေးဟာ meme ပုံ အဖြစ်လည်း ရေပန်းစားပါသေးတယ်။
9. CF queen!
BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ member တွေ အကုန်လုံးဟာ ကြော်ငြာအရမ်းရိုက်ရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးကတော့ CF Queen Lisa ရဲ့ Sprite ကြော်ငြာ ရိုက်တုန်းက ပုံဖြစ်ပါတယ်။
10. That smile is the best smile
BlACKPINK House ရဲ့ episode တခုမှာ အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးဟာ ခရီးတခု ထွက်ခဲ့ကြပြီး paragliding စီးခဲ့ကြပါတယ်။ Lisa လည်း စီးခဲ့ပြီး စီးနေတုန်း လေတိုက်လွန်းလို့ အရှေ့ဆံပင်လေးတွေ လန်သွားပေမဲ့ Lisa က တော့ ဂရုမစိုက်ဘဲ ပျော်ပျော်ကြီး စီးနေခဲ့ပါတယ်။
11. This is the cutest moment in history!
Lisa လေးဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ လင်းပိုင်လေးကို အနမ်းပေးချင်လွန်းလို့ သူမတန်ဖိုးထားရတဲ့ bangs လေးကို ဖယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
12. A glamorous close-up
Lisa က ဘယ်ရှူထောင့်က ကြည့်ကြည့် လှနေတာကို ခုလိုမြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးကရိုက်ရိုက် အနီးကပ်ရိုက်ရိုက် Lisa က အရမ်းကြည့်ကောင်းပါတယ်။
13. She makes sure her forehead looks good!
Lisa က သူမနဖူးလေးကို ရှေ့ဆံပင်နဲ့ အမြဲဖုံးထားပေမဲ့ ပြီးပြီးရော မဖုံးထားဘဲ နဖူးလေးကို သေချာလိမ်းခြယ်တတ် ပါသေးတယ်။
14. Sometimes she wants to hide them
ဒီအခိုက်အတန့်လေးကတော့ Lisa သူမရှေ့ဆံပင်ပုံပျက်မှာဆိုးလို့ သေချာဖုံးနေတာလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ လေတွေက သူမနဖူးအလှလေးကို မပေါ်ပေါ်အောင် ကျီစယ်နေပါတယ်။
Next လောကဓံအနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ကြုံ‌တွေ့ရတိုင်း အဖွဲ့အတွက်အားအင်ဖြစ်စေခဲ့သူတွေကိုပြောပြခဲ့တဲ့ J-Hope »
Previous « လက်ရေးမူနဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် ထပ်မံ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယားမော်ဒယ် Lee Seo Ho
အသက် ၁၇ နှစ်မတိုင်ခင်မှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ကြတဲ့ Kpop အမျိုးသားအဆိုရှင် ၈ ဦး
D.O တစ်ယောက် သူ့ကို ပူးကပ်ပြီးခင်တွယ်နေတယ်လို့ ပြောလာခဲ့တဲ့ Hongki
သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်မှာပါ အောင်မြင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ “Produce 101” ပြိုင်ပွဲဝင်ဟောင်းများ
တစ်ခါနားထောင်မိရုံနဲ့ စွဲလန်းသွားစေနိုင်တဲ့,ကီးအနိမ့်သံကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ K-Pop Idol ၆ ဦး